Wicitaano taleefan oo ballaaran oo lala leeyahay sipgate.io > Vielhuber David
Wicitaano taleefan oo ballaaran oo lala leeyahay sipgate.io03
Sipgate wuxuu abuuray daruur xiisaha leh API oo leh sipgate.io , oo midkood uu leeyahay fursado badan oo ku saabsan taleefanka internetka. Koontadu waa lacag la'aan, sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar ah in la dhigo lambar kasta oo diraa oo bilaash ah Bakhaarka Muuqaalka oo lacag la'aan ah. Dukumiintiyada sipgate.io wali waa la ballaarin karaa, laakiin aqrin yar oo rasmi ah Sipgate API qofku si dhakhso leh ayuu ku ogaan karaa waxyaabo xiiso leh.
Nidaamka soo socda waxaan ku ogaanay dhaqanka soo socda: Ujeeddooyinka imtixaanka waxaan ugu yeernaa darsin lambarro taleefan midba midka kale ah si aan ugu ciyaarno feyl maqal ah ka dibna dib ugu soo celino mar kale.
Fidinta PHP -ka XML-RPC waa in lagu rakibaa. Wicitaanada hadda waa la sameeyay - si aan u ciyaarno feylka maqalka, waxaan galnaa URL kiciya oo ku jira dib-u-celinta Sipgate ee wicitaannada socda (haddii aan nafteena u wacno) iyo wicitaannada soo socda (haddii qof uu dib u soo waco) oo aan dhaqaajino cilladda -Qoraal:
Hadda waxaan diyaarineynaa feyl maqal ah (kaas oo sida ku cad dukumintiga ay tahay in loo helo isagoo ah mono 16bit PCM WAV feyl). Si tan loo sameeyo, waxaan tuurnaa ffmpeg si aan ugu badalno feyl MP3 ah qaabka la doonayo:
Haatan waxaan kuwada xareynaa feylkaan WAV wadajirka ah qoraalka soo socda ee XML illaa https://www.tld.com/sipgate:/
Haddii aad rabto inaad kala duwanaato feylasha maqalka, waxaa lagugula talinayaa inaad marwalba isticmaasho magac fayl oo cusub (sound-v * .wav) sababaha keyd ahaan.
Wicitaanno is barbar socda ayaa suurtagal ah (sida ku cad bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Sipgate waxaa jira xaddidnaanta 5 isku xirnaanta isku mar, laakiin waxaan awooday inaan sii abuuro wax intaa ka badan), halkan waa inaad markaa si uun u hagaajisaa qiimaha hurdada.
Cusbooneysii 03/2022 : Sipgate hadda wuxuu meesha ka saaray interface-kii XML-RPC ee la isticmaalay. Sidaa darteed, xalka kore hadda lama isticmaali karo. Beddelka xasiloon waa, tusaale ahaan, aaladaha khadka taliska sida baresip ee Linux (iyadoo la kaashanayo moduleka alsa iyo taliska /ausrc aufile,audio.wav ) ama tSIP ee Windows. nambarka taleefoonka iyadoo la kaashanayo tSIP oo ciyaaraya faylka maqalka ah: